တရုတ်လက် ၀ တ်ရတနာနှင့်မိတ်ကပ်စီစဉ်သူ၊ acrylic လက်ဝတ်ရတနာစီစဉ်သူ၊
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Retailer , Service , Trade Company
အဓိကစျေးကွက်များ: Americas , East Europe , Europe , North Europe , Other Markets , West Europe , Worldwide , Asia , Oceania
ဖေါ်ပြချက်:လက်ဝတ်ရတနာနှင့်မိတ်ကပ်စီစဉ်သူ,acrylic လက်ဝတ်ရတနာစီစဉ်သူ,Transparent Makeup Organizer,ရှင်းလင်းသောအလှကုန်သိုလှောင်မှု,,
စားနပ်ရိက္ခာ Display ရပ်
ကြီးမားသော Acrylic အလှကုန်မျက်နှာပြင်
စိတ်ကြိုက်အလှကုန် display display
acrylic ဓာတ်ပုံ Frame
acrylic သူတော်ကောင်းတရား Block
စိတ်ကြိုက် acrylic လက်မှုပညာ
 Homeထုတ်ကုန်များacrylic စည်းရုံးရေးမှူးacrylic အလှကုန်သိုလှောင်သေတ္တာ
acrylic အလှကုန်သိုလှောင်သေတ္တာ (Total 77 Products)
acrylic အလှကုန်သိုလှောင်သေတ္တာ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လက်ဝတ်ရတနာနှင့်မိတ်ကပ်စီစဉ်သူ, acrylic လက်ဝတ်ရတနာစီစဉ်သူ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Transparent Makeup Organizer R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
စားပွဲဝိုင်းအတွက်ရှင်းလင်းသော Acrylic Pen Holder Display Organizer
ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးနှင့်ကြည်လင်သော Acrylic ခဲတံသေတ္တာ
စားပွဲဝိုင်းအတွက်စိတ်ကြိုက် Acrylic ကလောင် Holder စည်းရုံးရေးမှူး
အရည်အသွေးမြင့် Acrylic Pen Holder Display Stand
စိတ်တိုင်းကျခရစ်စမတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Acrylic ခဲတံကိုင်ဆောင်သူ
စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဖြူရောင် acrylic ခဲတံဖလား Holder
စိတ်ကြိုက် Functional Acrylic စားပွဲပေါ်မှာကလောင် Holder
အလုပ်လုပ်သော acrylic အမည်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ / စက္ကူစည်းရုံးရေးမှူး
လက္ကားစိတ်ကြိုက် acrylic စီးပွားရေးကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ Box ကို
Mini Clear Acrylic စီးပွားရေးကတ်ကိုင်ဆောင်သူ
ဒေါင်လိုက် Acrylic စီးပွားရေးကဒ်ပြမျက်နှာပြင်
စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့် Acrylic Business Card Holder
Multi-Functional Acrylic ရုံးသုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများစီစဉ်သူ
အရည်အသွေးမြင့် Clear Acrylic ဖြတ်စားပွဲစီစဉ်သူ
စိတ်ကြိုက်သေးငယ်တဲ့ Lucite စားပွဲအံဆွဲ Organizer
Lid ဖြင့်ရှင်းလင်းသော Acrylic Desk Organizer Set
Custom Acrylic Office File Organizer
ဈေးပေါသော Desktop Acrylic Calendar Frame
Diy Acrylic စားပွဲတင်ပြက္ခဒိန်အရည်အသွေးကောင်းသည်
ဖက်ရှင် Acrylic Desktop ပြက္ခဒိန်ကိုင်သူ
ရောင်းရန်လက်ကား acrylic အမြဲတမ်းစားပွဲတင်ပြက္ခဒိန်
ထုပ်ပိုး: ပုံးတစ်ပုံးစီအိတ်လျှင် PE အိတ်
စားပွဲတင်ဘို့ A-2OF0058 ရှင်းလင်းသော Acrylic ကလောင် Holder Display ကိုစည်းရုံးရေးမှူး ဒီ acrylic ကလောင်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ acrylic ရုံးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများထံမှစီးရီး။...
A-2OF0057 အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်ရှင်းလင်းသော Acrylic ခဲတံသေတ္တာ ဒါကအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ acrylic pen box လေးတစ်ခုပါ။ ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်တောက်ပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ acrylic ဘောပင် ကိုပြုလုပ်ရန် ၄ မီလီမီတာကြည်လင်သော...
စားပွဲဝိုင်းအတွက် A-2OF0056 စိတ်ကြိုက် Acrylic ကလောင်ကိုင်ဆောင်သူစည်းရုံးရေးမှူး ဤ acrylic ဘောပင် သည် A-2OF0055 နှင့်ဆင်တူသည်။ သူတို့ဟာတူညီတဲ့ရုံးသုံးပစ္စည်းများမှလာသည်။ Acrylic...
A-2OF0055 အရည်အသွေးမြင့် Acrylic Pen Holder Display Stand တကယ့်ကိုလှပတောက်ပသော acrylic ကလောင်ပိုင်ရှင် ! ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှအခြား acrylic ဘောပင် နှင့်မတူဘဲဤစီးရီးသည်ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မြင့်မားသောကြည်လင်ပြတ်သားသော acrylic...
A-2OF0028 စိတ်ကြိုက် Christmas Christmas Clear Acrylic ခဲတံကိုင်ဆောင်ထား ခရစ်စမတ်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ထူးခြားသည့် acrylic ဘောပင်ဖြစ်သည် ။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောမြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။...
A-2OF0026 စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဖြူရောင် acrylic ခဲတံဖလားကိုင်ဆောင်သူ ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့် acrylic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောအထူးပြုလုပ်ထားသော acrylic pen ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးဒီဇိုင်းပုံစံသည်ချစ်စရာကောင်းသည်။...
A-2OF0023 စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် Acrylic စားပွဲတင်ကလောင်ရှင် ဤအရာသည်သင်၏ရုံးစားပွဲပေါ်တွင် ထားနိုင် သည့်သေးငယ်သော acrylic ဘောပင်ဖြစ်သည် ။ ဒီ ဘောပင် ကိုသေးငယ်သော်လည်းသေးငယ်သောအရာများအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ စီစဉ်ရမည့်သေးငယ်သောအရာအချို့ရှိပါသည်။...
A-2OF0059 အလုပ်လုပ်သော Acrylic အမည်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ / စက္ကူစီစဉ်သူ အဖုံးမပါဘဲဤသေးငယ်သော box ကို Multi-functional ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းကိုသင်ကဒ်ပြားကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုသေးငယ်သောစီစဉ်သူအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်။...
A-2OF0029 လက်ကားစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Acrylic Business Card Holder Box ကို ဤပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တွင် A-2OF0027 နှင့်ဆင်တူသည့်အခြား acrylic အမည်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ ဖြစ်သည်။ ခြားနားချက်ကတော့ဒီတစ်ခုကပြသဖို့ဖြစ်ပြီး A-2OF0027...
A-2OF0027 Mini Clear Acrylic စီးပွားရေးကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးသုံးပစ္စည်းများအတွက်အခြား acrylic အမည်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကိုသယ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သည် ဤကဲ့သို့သော acrylic အမည်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ တစ် ဦး...
A-2OF0025 ဒေါင်လိုက် Acrylic စီးပွားရေးကဒ်ပြမျက်နှာပြင် acrylic အမည်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ သည်အသုံးအများဆုံးရုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌ကဲ့သို့ပင် hard hold ဟူသောအမည်ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဦး ကိုသင်တွေ့မြင်ရပေမည်။ အများစုမှာရှင်းလင်းသော acrylic...
A-2OF0024 စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့် Acrylic Business Card Holder ဤအရည်အသွေးမြင့် acrylic စီးပွားရေးကဒ်ကိုင်ဆောင်သူသည်အလွန်သေးငယ်။ လှပသည်။ လုံးဝပွင့်လင်းမြင်သာသောဒီဇိုင်းကသင်၏စီးပွားရေးကဒ်ကိုပြသရန် ပို၍ သင့်တော်စေသည်။...
A-2OF0064 Multi-Functional Acrylic ရုံးသုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများစီစဉ်သူ ရုံးခန်း စားပွဲစီစဉ်သူ ကိုသင်ရှာဖွေနေလျှင်ဤသည်မှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့စီးရီးပေး သင်၏လိုအပ်ချက်အရ acrylic ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ။ ဒါအတွက် အောက်ဖော်ပြပါပုံ၏ desktop...
A-2OF0063 အရည်အသွေးမြင့်သော Clear Acrylic Cut Desk Organizer ဤသည် acrylic desktop စီစဉ်သူ သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးသုံးပစ္စည်းများ မှလာသည်။ ဤကဲ့သို့သော Acrylic desktop စီစဉ်သူ သည်လက်တွေ့ကျပြီးအသုံးဝင်သည်။...
A-2OF0061 စိတ်ကြိုက်အသေးစား Lucite စားပွဲအံဆွဲ Organizer ရုံးခန်းစားပွဲခုံ၏ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်သင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖူးပါသလား။ အခု acrylic desktop စီစဉ်သူ ကမင်းကိုအများကြီးကူညီလိမ့်မယ်။ ဒါကသေးငယ်တဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ desktop စီစဉ်သူ...
Lid နှင့်အတူ A-2OF0035 ရှင်းလင်းသော Acrylic စားပွဲထိုးစီစဉ်သူ ၎င်းသည်အဖုံးပါသည့်ကြီးမားသည့် acrylic desktop စီစဉ်သူ ဖြစ်သည်။ စားပွဲစီစဉ်သူတွင် အလှဆင်ပစ္စည်းများ (သို့) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစွာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop စီစဉ်သူ...
A-2OF0018 အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Custom Acrylic Office File Organizer ဖိုင်စီစဉ်သူသည်အသုံးဝင်ဆုံး desktop စီစဉ်သူ ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းနီးပါးသည်အလုပ်ချိန်အတွင်း၎င်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤ acrylic စာရွက်စာတမ်း စီစဉ်သူတွင်အလွှာသုံးလွှာရှိသည်။...
Stand နှင့်အတူ A-2CA0009 စျေးပေါသော Desktop Acrylic Calendar Frame ပထမတစ်ချက်မှာစာရွက်ပြက္ခဒိန်လို့မင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ acrylic ပြက္ခဒိန် စက္ကူပြက္ခဒိန်ကဲ့သို့ဒီဇိုင်းနိုင်ရှာပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop acrylic ပြက္ခဒိန်...
အရည်အသွေးကောင်းနှင့်အတူ A-2CA0008 Diy Acrylic စားပွဲတင်ပြက္ခဒိန်ခင်းကျင်း ဤသည်ထူးခြားတဲ့ acrylic ပြက္ခဒိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးချစ်စရာနှင့် desktop ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လည်းလက်တွေ့ကျပြီးလှပသည်။...
A-2CA0007 ဖက်ရှင် Acrylic Desktop ပြက္ခဒိန် Holder ရပ် ဤသည်သေးငယ်တဲ့ desktop acrylic ပြက္ခဒိန် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က၎င်းရဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့်ပထမတစ်ချက်မှာနှိုးစက်နာရီတစ်ခုလို့သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ Mini design ကဒီ acrylic ပြက္ခဒိန်...
ရောင်းရန် A-2CA0006 လက်ကား Acrylic အမြဲတမ်းစားပွဲတင်ပြက္ခဒိန် ပုံမှ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းဤ acrylic ပြက္ခဒိန်ရပ်တည်ချက် သည်ပုံမှန်စာရွက်စားပွဲပြက္ခဒိန်နှင့်တူသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ acrylic အလှကုန်သိုလှောင်သေတ္တာ ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် acrylic အလှကုန်သိုလှောင်သေတ္တာ အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ လက်ဝတ်ရတနာနှင့်မိတ်ကပ်စီစဉ်သူ,acrylic လက်ဝတ်ရတနာစီစဉ်သူ,Transparent Makeup Organizer,ရှင်းလင်းသောအလှကုန်သိုလှောင်မှု,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် acrylic အလှကုန်သိုလှောင်သေတ္တာ ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ acrylic အလှကုန်သိုလှောင်သေတ္တာ အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် လက်ဝတ်ရတနာနှင့်မိတ်ကပ်စီစဉ်သူ,acrylic လက်ဝတ်ရတနာစီစဉ်သူ,Transparent Makeup Organizer,ရှင်းလင်းသောအလှကုန်သိုလှောင်မှု,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ acrylic အလှကုန်သိုလှောင်သေတ္တာ အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
စိတ်ကြိုက် acrylic ဟာ့ဒ်ဝဲလက်လီ display ကိုရပ်တည်ချက်
Apex အဆင့်မြင့် Acrylic အလှကုန်နှုတ်ခမ်းနီမတ်တပ်ရပ်
စိတ်ကြိုက် Acrylic နားကြပ် Display နားကြပ်မျက်နှာပြင်
သတ္တုအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ acrylic စီးကရက်ပြသမှုဗီရို
ဒီဇိုင်းသစ် Acrylic နားကြပ်ခင်းကျင်းပြသ
Clear Acrylic ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်အလှကုန်နှုတ်ခမ်းနီပြကွက်
Acrylic မိတ်ကပ် Lipstick ကောင်တာလက်သည်းဆိုးဆေး display stand
စိတ်ကြိုက် acrylic မျက်နှာပြင် Acrylic LED လက်မှုပန်းပန်းများ
Apex ဒီဇိုင်းသတ္တု acrylic လျှပ်စစ်စီးကရက်ခင်းကျင်းပြသ
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း Apex acrylic စီးကရက်ခင်းကျင်းပြသ
စိတ်ကြိုက်ကုန်ပစ္စည်းအသစ် Clear Acrylic Mascara မျက်နှာပြင်
အီလက်ထရောနစ်စီးကရက် acrylic အငွေ့ပျံ E- ဆေးလိပ်ပြ display
လက်ကား Acrylic သူတော်ကောင်းတရားဓာတ်ပုံလုပ်ကွက်
ကြီးမားသောထုံးစံ acrylic အနားအပြာရောင်ဆုဖလားပွတ်
APEX 500ml ABS ပလပ်စတစ်အလိုအလျောက်အရည်ဆပ်ပြာပေးစက်
APEX Touchless အလိုအလျောက်အရက်လက်သန့်စင်ဆေးပေးစက်
Apex Face Recognition သာမိုမီတာအနီအောက်ရောင်ခြည်စကင်နာတံခါးစနစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်စနစ်တစ်ခုလုံး
3d Face Recognition ကင်မရာ Barrier တက်ရောက်မှု Access Controller
လက်ဝတ်ရတနာနှင့်မိတ်ကပ်စီစဉ်သူ acrylic လက်ဝတ်ရတနာစီစဉ်သူ Transparent Makeup Organizer ရှင်းလင်းသောအလှကုန်သိုလှောင်မှု လက်ဝတ်ရတနာနှင့်အလှကုန်စီစဉ်သူ
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Apex Artcrafts Co,.LTD All rights reserved ။